Ku guuleystayaasha Dhiirrigelinta 2009 - Geofumadas
Oktoobar, 2009 tabo cusub, Microstation-Bentley, egeomates My
Kani waa noocii ugu horreeyay ee qaabka loo Waxyooday ee wixii ahaan jiray Bentley Awood (Abaalmarinta BE). Waxay ka guurtay astaamaha mawduucyada una gudubtay hababka ugu wanaagsan, iyadoo xoogga saareysa ku xirnaanta marka loo eego geedi socodka laftiisa. Bentley mar hore ayuu sii daayay liiska rasmiga ah ee ku guuleysta, Waxaan wax kale ku dari doonaa chronicle.
Munaasabadda waxaa lagu qabtey Westin Charlotte, iyadoo kaqeybgalayaashu ka yar yihiin sanadihii kale isbedelka qaabka iyo dhibaatada dhaqaale. Laakiin sidaas ugama macaash badnayn sababtaas, inkasta oo isbeddelka heerka aadaabta la arki karo.Haatan aan xusuusano ka hor intaan loo magacaabin gala, oo soo-bandhigayaashu ay xirtaan qaansooyin; hadda waxay ahayd wax aan caadi ahayn injineeradiina waxay dareemayaan fiicnaan.
Farshaxanka ayaa si wacan u qabtay Chris Barron, wuxuu bilaabay inuu heesto jimicsi la yiraahdo Bentley Infraestructures Raadiyay, aad u wanaagsan; oo ay weheliyaan PowerPoint xiiso leh oo soo koobaysa taariikhda cusub ee manida ee abuurista kaabayaasha, marwalba mawduucyada la magacaabay.
Waxaa jiray dhexdhexaadiyeyaal kala duwan, oo ay ku jiraan Duqa Magaalada Charlotte iyo maamulayaasha Bentley, oo la xiriira joogtaynta xirfadaha, Bulshada, Deegaanka iyo hal-abuurnimada; taas oo aqoonsi qaar la geeyay. Ka hor intaan la bixin abaalmarinta koowaad, Chris wuxuu naftiisa ugu sheegay kaftan ku saabsan farqiga u dhexeeya Baseball iyo Soccer, in soo jiid Mahadcelin la'aanta farsamoyaqaanno badani u shaqeeyaan mashruuc, iyagoo shaqeeya saacado dheeraad ah, habeenno hurdo la'aan ah iyo madax xanuun si ay masuuliyiintoodu ugu sacbiyaan abaalmarin ku kacaysa $ 300. Gadaal ahaan, habka wax soo saarka ee abaalmarinta cusub ayaa la soo bandhigay, laga soo bilaabo naqshadeeda aasaasiga ah ee 3D, maroojinta, qaniinyada, hagaajinta, soo saarida daabacaadda 3D, illaa nidaamka burburka ee aqoon isweydaarsiga metallurgy.
Ugu dambeyntii ku dhammaaday muhiimadda ay leedahay in software ku siin kara model ganacsiga, taas oo ku guuleystay badan, profile qeybtii abaalmarinta tusay, qaadashada hal 8 oo wuxuu u muuqday galaas mar walba sigaar cabbin ee cagaaran, V warqad iyo i dhigyo ah: Looma suurtoobi lahayn iyadoo aysan jirin V8i.
Inkasta oo xubno ka mid ah warbaahinta lahaa meel rights reserved, waxaan miiska wada fadhiyeen uu la wiilasha ee magaalada Caceres cidda finalka yimaadeen, oo ay la socdaan fulinta account ah Bentley Spain iyo miiska isku laba Warkii Microstation: mid ka mid ah ah horumariyaha Microstation Comunity (TMC) hadda opacándose la 2.0 retouching webka Noqo Iskuduwaan.
Waan u hambalyeeyay caruurta reer Cáceres, waan jeclaan lahaa inaan la dabaaldego iyaga sida wakhtigaasLaakiin arrinta dalka for xeerbeegtida qabyada ah Honduras (2004 iyo 2005 laga siiyay in) iyo El Salvador, oo laba jeer loo magacaabay waa dhibic Doolaal ee la barbardhigo in ku dhow kasta oo dadaal in ay ka gudbaan waxa ay lagama maarmaan noqon doona in la caddeeyo Bentley Hotels, Server Geospatial iyo Project Wise geofumado ee I-model.
Ka dib xafladda abaalmarinta, wuxuu ku noolyahay qaab nololeed Gringolandia, halka inta soo hartay naftooda u hibeeyeen inay u jeestaan ​​ismarisyada nafaqada leh iyo tan ugu wanaagsan ee ay soo saarto khamriga. Waxaan haystay wakhti aan kula hadlo Alfredo Castejón, oo reer Mexico ah kana mid ah howl wadeenada aan wareystay sanadkii hore. Waxay ii rajeeyeen nasiib dhibaatooyinka imanaya Honduras iyo maalinta xigta ee roulette ee tartanka Koobka Adduunka halkaas oo El Salvador, Costa Rica iyo Mareykanka ku lug leh.
Dabadeedna waxaan aaday nasasho, waxaan maqlay in Micheletti iyo Zelaya ay isku raaceen Reinaldo Rueda aniga oo ah madaxweyne ku meel gaadh ah waxaanan ku soo toosay qarowgii ay u siiyeen abaalmarinta tacsiyeynta. Muddo ka dib waxaan fahmay inay calaamad wanaagsan tahay in Honduras ay u soo bixi doonto Koobka Adduunka ugu dambayntiina waallidan ay dhowaan soo afjari doonto.
Kuwa ku guuleysta
aqlabiyad badan ayaa joogta Mareykanka, halkaasoo Bentley uu ku leeyahay boos adag heerka injineernimada iyo dhirta, banaanka Brazil, Spain, United Kingdom, Vietnam, Madagascar iyo India ayaa ku guuleystay abaalmarino. Tani waa liiska abaalmarinta la siiyay:
WSP Finland Ltd - Ngyuen Van Troi-Tran Thi Ly Bridge (Vietnam)
NBBJ - Cusbitaalka Valley Valley (USA)
Kacsanaanta iyo horumarinta dhulka
Engineers Kaasiinta KASL - Metro Metro Station No. 29 (USA)
Campus, garoomo diyaaradeed iyo qalab milatari
CH2M HILL - Qeybta 1: Barnaamijka Casriyeynta O'Hare (USA)
Shabakadaha iyo isgaarsiinta
Adeegyada Qandaraaska Qandaraaslaha, Inc. - Magaalada Port Saint Lucie Fiber Optic Network Design (USA)
Hatch Africa (Pty) Ltd - Mashruuca QMM Ilmenite (Madagascar)
Saliid iyo gaas
Mashruucyada Cianbro - Mashruuca kordhinta Motiva Crude (USA)
Soo saarida tamarta
Energoprojekt Gliwice, SA - PS20 Warshad Sare Solar (Spain)
Gaadiidka iyo tareenada
Parsons Brinckerhoff - Central Phoenix / Habka Wadooyinka Tareenka ee Bariga Dhexe (USA)
Creighton Manning Engineering, LLP - Waddada 85 Slingerlands Bypass Extension (USA)
Hawlaha Huntsville - Hirgelinta Isdhexgalka ee ProjectWise, Bentley Expert Designer, iyo SAP (USA)
Nidaamyada qashinka iyo dhirta daaweynta
CDM - Mashruuca Biyaha Casriga ee Casriga ah ee Casa Grande (USA)
Shabakadaha biyaha, kanalka iyo biyaha
Xukuumadda Maharashtra, Waaxda Biyaha iyo Fayadhowrka - Maareynta Dhibaatooyinka Bixinta Biyaha ee Dalalka Horumarinayo (Hindiya)
Isgaadhsiinta iyada oo loo eegayo
Mott MacDonald Ltd - Jidka Tareenka (USA)
Kooxaha shaqada ee isku xiraya
Engevix Engenharia SA - Hydropower
Plant Coqueiros (USA)
Feilden Clegg Bradley Studios LLP - Maktabadda Worcester iyo Xarunta Taariikhda (USA)
Edge Structures Ltd - Dibudhiska Maxkamadda Wimbledon Xarunta Dhaqanka iyo Dib u Celinta (Boqortooyada Ingiriiska)
Post Previous" Hore Arc Ma jiraan waxyaabo aan caadi ahayn
Post Next SIG ee CáceresNext »
3 Jawaab oo ah "Ku guuleystayaasha guuleysta 2009"
g! isagu wuxuu leeyahay:
Oktoobar, 2009 at
Waad mahadsantahay, Juan, in dad badani filayaan.
Juan Manuel Escuredo isagu wuxuu leeyahay:
Hello G! Waxaan rajeynayaa inaad ku raaxaysatay xafladda abaalmarinta.
Aynu aragno in xaaladdu ay soo afjaranto, Michelettes iyo Zelayas midba midka kale u fahmaan wanaagga dadka.
wilson borjas isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rajeynayaa in riyada madaxweynaha ku-meel-gaadhka ah la dhamaystiri lahaa, cadaadiskaasna waxaa laga qaadi lahaa dhibaatada ka sii dareysa maalin kasta,
Sida lagu sharraxay, waxay ahayd mid aad u fiican dalxiiskiisa Mareykanka.
Maxay yihiin iskudhafyada Cartesian?
Maxaad u qarinaysaa IP-gaaga?
Dhulku intee ka fogyahay Qorraxda?
Waa maxay farqiga u dhexeeya orthophotos, orthophotomaps, orthomosaics, iyo orthophotos run ah?
Ispektum: Ku Kordhi Ganacsigaaga Qalabka Khariidaynta GIS
32 saacadood oo fiidiyoow ah - 100% khadka tooska ah